पूर्वरानी कोमलको जन्मदिन सिमरामा मनाइने :: Nepal, Political News, Science, Social, Sport, Ecomony, Business, Entertainment, Movie, Audio, Video, Nepali Model, Actor, Actores, Interview
पूर्वरानी कोमलको जन्मदिन सिमरामा मनाइने
१४ माघ, काटमाण्डौं । छोरा पारसका कारण मनमा शान्ति नभएको भन्दै पूर्वरानी कोमल शाहले यसपटक आफ्नो जन्मदिन बाराको सिमरामा मनाउने भएकी छन् । कोमलको जन्मदिन मनाउने क्रममा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले तराईका केही जिल्लाको भ्रमण गरेर आफूप्रतिको जनमत बुझ्ने तयारी गरेका छन् ।
शासन सत्ता गुमेपछि पनि निर्मलनिवासमा जन्मोत्सव मनाउँदै आएकी पूर्वरानी कोमल शाहले बाराको सिमरास्थित पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रका बालसखा प्रभुशमशेर राणाको दरबारमा मनाउन लागेकी हुन् । स्रोतका अनुसार थाइल्याण्डमा रहेका पूर्वयुवराज पारस लागुऔषधलगायतका काण्डमा मुछिएको र भेट्नसमेत नआएका कारण पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र र पूर्वरानी कोमल चिन्तित छन् । उनकै चिन्ताले निर्मल निवासमा रहँदा मनमा शान्ति नभएपछि उनीहरु काठमाण्डौं बाहिर जान लागेको नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।
3 Comments on “पूर्वरानी कोमलको जन्मदिन सिमरामा मनाइने”
लाजाराम wrote on 27 January, 2013, 2:04
ज्ञानेन्द्र शाहजी तपाईप्रति जनता ले जनमत बुझाउदा बुझाउदा थाकिसकेका छन क्रीपया गरेर बारम्बार जनता संग जनमत को भीक मागेर सताउनु को सट्टा जन्मदिन मनाउने खर्च ले भीक मागेर खाने गरीब जनता लाई खाना खुवाएर जन्मदिन मनाईदिने हो भने कती निमुखा जनता खुश हुने थिये र तपाई पनी पुर्वराजा भयेको शुहाउने थियो
Like or Dislike:48[जवाफ फर्काउनुहोस्]बिपिन भण्डारी Reply: January 27th, 2013 at 4:40 amए लाजालामजी ,सामान्य औषधी उपचार र सरकारी ढुकुटिको दुरुपयोग गरेर बिदेश भ्रमण गर्ने गरेको बर्तमानका गणतान्त्रीक राजनेता हरुमा चाही यो कुरा लागु हुदैन र ? अनि बारम्बार पार्टी र नेताहरुले हरुले गरिरहने चियापान कार्यक्रममा हुने लाखौ खर्चलाई पनि गरिब र निमुखा जनतामा खर्च गर्नु राम्रो हुदैन र ? कृपया उनिहरुलाई यो कुरा बुझाउनुस ।
Like or Dislike:61[जवाफ फर्काउनुहोस्]लाजाराम Reply: January 27th, 2013 at 6:00 amयी गणतान्त्रीक राजनेता होईनन यी त गणतान्त्रीक लाजनेता हुन यिनी हरुसंग लाज बाहेक केहि छैन त्यसैले राजा पनी लाजा हुनु भयेन